Kedu ihe dị iche n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Kedu ihe dị iche n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ
Kedu ihe dị iche n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ. Ọtụtụ mmadụ enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ. Nke mkpụrụ obi bụ àgwà mmadụ n'otu n'otu na mmụọ bụ akụkụ nke onye ahụ na-ejikọta na Chineke. Mkpụrụ obi na mmụọ ha jikọtara ọnụ na a ghaghị ịghọta ha abụọ ọnụ. Akwụkwọ Nsọ nyere ma mmụọ ma mkpụrụ obi ọrụ ụfọdụ.
1 Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
1.1 Mkpụrụ obi
1.2 Gịnị bụ mmụọ nsọ dị ka Bible si kwuo
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti mkpụrụ obi na mmụọ dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Mkpụrụ obi bụ akụkụ nke mejupụtara àgwà anyị. O nwere mmetụta, uche, na echiche ya. Ọ bụghị ihe anụ ahụ, kama ọ jikọtara ya na ahụ anyị. Mkpụrụ obi na-akọwa ihe ọmụma nke anụ ahụ ma na-emetụta omume ya.
N'ime Akwụkwọ Nsọ, mkpụrụ obi na-egosipụtakwa isi ndụ nke onye ọ bụla. Ihe e kere eke nwere mkpụrụ obi dị ndụ na ihe nwuru anwu enweghi nkpuru-obi. Enweghị mkpụrụ obi, ahụ na-anwụ anwụ. Mgbe ị na-anwụ, mkpụrụ obi na-ekewapụ n'ahụ. Na nbilite n'ọnwụ, onye ọ bụla hụrụ Jizọs n'anya ga-anata aru ọhụrụ maka mkpụrụ obi ya.
Otú ahụ ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ dịkwa. A na-agha ya n’ire ure, a na-akpọlitekwa ya n’ereghị ure. A na-agha ya n'ihere, a na-eweli ya elu n'ebube; n'adịghị ike, ọ ga-ebili ọzọ n'ike. Ọ bụrụ na-aghaa anụ ahụ, a ga-akpọlite ​​anụ mmụọ. E nwere ahụ anụmanụ, e nwekwara ahụ nke mmụọ. 1 Ndị Kọrịnt 15: 42-44
Gịnị bụ mmụọ nsọ dị ka Bible si kwuo
Mmụọ anyị bụ njikọ anyị na ihe ime mmụọ. Chineke bụ mmụọ. Mmụọ bụ ihe na-enye ndụ, n'ihi na ndụ niile sitere na Chineke.
Mmụọ nsọ na-akọwa mmetụta kasịnụ ná ndụ anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-anata mmetụta nke Mmụọ Nsọ, ndị na-ama ikpe maka mmehie, mkpa nchegharị na nzọpụta, na nke na-enye ohere inwe mmekọrịta onwe onye na Chineke. N'aka nke ọzọ, mmụọ nsọ, mgbe ọ na-enupụrụ Chineke isi, pụrụ inweta mmetụta ọjọọ.
"Mmụọ n'onwe ya na mmụọ anyị na-agba akaebe na anyị bụ ụmụ Chineke." Ndị Rom 8: 16
Mgbe e kewapụrụ mmụọ nsọ na mmụọ nke Chineke, ọ dị ka a ga-asị na ọ nwụrụ anwụ, n’ihi na Chineke bụ isi iyi nke ndụ niile. Anyị nwere ike mara naanị
Baịbụl kwukwara na mmụọ nsọ na-enwe mmetụta uche ma na-eme mkpebi dị ka mkpụrụ obi. Ọ dị mkpa icheta na mkpụrụ obi na mmụọ nwere njikọ chiri anya na anụ ahụ. Ụfọdụ ọrụ ya na-agbakọ ma ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ. Ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ na-etolite a dum, nke bụ onye, ​​ha abụghị atọ dị iche iche ihe.
Otu Chineke nke udo ahụ ga-edozikwa unu nsọ kpamkpam; ka edebe kwa ndu-gi ọ bula, na mọ-gi na nkpuru-obi-gi na aru-gi dum, buru ndi anāpughi ita uta bayere obibia nke Onye-nwe-ayi Jisus Kraist. 1 Ndị Tesalonaịka 5:23
Anyị nwere olile anya na edemede a nyere gị aka ịghọta kedu ihe dị iche na mkpụrụ obi na mmụọ dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo. Ọ bụrụ ugbu a ịchọrọ ịmata kedu ụdị ekpere dị iche iche nke dị, gaa n'ihu na-eme nchọgharị Discover.online
Gịnị bụ asụsụ nke ndị mmụọ ozi nke eluigwe